मन्त्रीकै निर्देशमा स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा ब्रम्हलुट भएको खुलसा, सिंहदरबारमा उथुलपुथल ! – Sidha Onlinepatra
मुख्य पृष्ठ /News/मन्त्रीकै निर्देशमा स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा ब्रम्हलुट भएको खुलसा, सिंहदरबारमा उथुलपुथल !
काठमाडौं– । स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनलसँग विवादास्पद सम्झौतामा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालको भूमीका रहेको पाइएको छ। ढकालसँगै उनका विज्ञ सल्लाहकारको निर्देशनमा विवादस्पद सम्झौता भएको पाइएको हो।
खरिद प्रक्रियाबारे स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको कागजपत्र अध्ययन गरेको संसदको सार्वजनिक लेखा समितिका अनुसार विज्ञ सल्लाहकार डा. खेम कार्कीले ओम्नी समूहसँग औषधि खरिद गर्न सिफारिस गरेका थिए भने मन्त्रीले निर्णय गरेका थिए । त्यसपछि मात्र स्वास्थ्य सेवा विभागले सम्झौता गरेको पाइएको छ ।
स्वास्थ्य सेवा विभागले १२ चैत २०७६ मा कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा उपचारका लागि चाहिने औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता अनुसार ओम्नी समूहले १६ गते पहिलो लटमा सामान पनि ल्याएको थियो । तर महँगोमा सामान खरिद भएको भनेर विरोध भइरहेका बेला थप सामान ल्याउन नसकेपछि विभागले १९ चैतमा सम्झौता रद्द गर्ने घोषणा गर्‍यो ।
१२ गते १ बजे आपूर्तिकर्तासँग छलफल गरेको मन्त्रालयले विज्ञ सल्लाहकार डा. खेम कार्कीको नेतृत्वमा वार्ता टोली बनायो । यो टोलीले छलफलमा सहभागी नै नभएको शंकास्पद कम्पनी अनिता बिजनेस हाउसलाई वार्ताका लागि छनोट गरेको भेटिएको छ।
नेपालमा आज बिहानै भेटिए २५ जना कोरोना संक्रमित